musha UNITED STATES BioGRAPHY STORies Vanyori veU.S. uye Vanyori venziyo Rihanna Childhood Story Plus Untold Biography Facts
CB inopa Nhoroondo Yakakwana yemuimbi weBarbadian uyo anozivikanwa se "RiRi". Rihanna Yedu Childhood Story uye Untold Biography Facts inounza iwe nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubva panguva yehuduku hwake kusvika zvino. Kuongorora kunosanganisira nhoroondo yeupenyu hwake musati mazita uye mumhuri. Kunyanya zvakadaro, vazhinji vanosiya uye ON-Screen inozivikanwa zvishoma nezvake pamusoro pake.
Hungu, munhu wose anoziva nezveshoko rake rakasiyana uye mafashoni. Zvisinei, vashomanana chete vanofunga nezveRihanna's biography iyo inonakidza chaizvo. Iye zvino, pasina humwezve, ngatitangei.
Rihanna Childhood Story Plus Untold Biography Facts: Upenyu Hwekutanga
Robyn Rihanna Fenty akazvarwa musi we 20th waFebruary 1988 kuSt. Michael Parish, Barbados.
Ndiye aiva mwana wekutanga akaberekerwa kubatana pakati paamai vake Monica Fenty (munyori wenhoroondo) nababa vake Ronald Fenty (mutariri wezvokuchengetedza mari).
Wechidiki Riri akakurira nevabereki vake nehanzvadzi dzake - Rorey & Rajad - muguta reBridgetown reBarbados, chitsuwa chekumaodzanyemba kweCaribbean chinonyanya kuzivikanwa nekuda kwemahombekombe ayo akanaka uye kuenzaniswa kwemitambo ye reggae.
Zvisinei, hutano hwaRihanna hwakanga husina zviratidzo zveSachiwi chakanaka chaaigara kuburikidza nehondo yababa vake inoratidzika sekusingaperi nekudhakwa kune doro uye crack cocaine.
Achigutsikana, akave nemusoro wemusoro wakapa uchapupu hwezvinetso zvevabereki vake nevabereki vake zvakakonzerwa nekudhakwa kwababa vake. Ronald aizotora makore akazotevera, achitaura zvakaipa pamusoro pekuita kwake kunoparadza nenzira inotevera:
"Handichazomboregereri pane zvandakaita kwaari. Ini ndichagara ndiine husiku hunofunga sezvandinofunga apo iye achichema, achindikumbira kuti ndirege. Asi ini ndakanga ndisina chivimbo uye ndakanga ndisingafungi. Mwanasikana wangu akanaka haafaniri kumboona zvinhu zvaakaita. "
Kunyange zvazvo kusagadzikana kwakaputika mumhuri yake Rihanna akawana kupukunyuka mukuimba nekuteerera reggae yakanga yakakurumbira zvikuru pachiwi. Mukuwedzera, akapedza nguva yakanaka pamhenderekedzo yegungwa nekudzidza kushambira, kubata hove uye kunyora.
Rihanna Childhood Story Plus Untold Biography Facts: Dzidzo neKubata Buildup
Rihanna ane dzidzo yake yepamusoro paBroome Memorial Primary School muSaint Micheal Barbados. Mwana akatambudzika akafambira mberi Combermere High School kumucheto kweBridgetown kuti atange rumwe rutivi rwehupenyu hwake, kunyora zviitiko zvinosanganisira kuvhiringidza kwevabereki vake nekuvandudzwa kwehutano hwake.
Yaiva paKombermere High School iyo Rihanna akabata chido chake chekuimba kuburikidza nekupinda muzvikoro zvepamusoro-soro zvemararamiro aakambokunda kuburikidza nekuimba Mariah Carey "Hero". Akaenderera mberi kuumba bhidhiyo rwiyo nemadzimai maviri vekirasi yake uye aizivikanwa kuti ari mukuru wemauto mune purogiramu yepasi-yehondo.
Rihanna Childhood Story Plus Untold Biography Facts: Road To Fame
Kunyange zvazvo Rihanna aine zvirongwa zvekupedza chikoro chesekondari, akazopedza nechishuwo chake chekuimba kuti kufambira mberi kwezvidzidzo kwakabayirwa paatari yekutsvaga basa mumimhanzi.
Tarenda yekuimba yakatora chisarudzo mushure mokunge yawanikwa munyika yekwavo neEvans Rogers, mukoti wezvinyorwa akamusimudzira munzira yehukuru. Rogers akanga ari panguva yezororo muBarbados nemudzimai wake apo Rihanna neshamwari dzake mbiri vakasarudza kuratidzira ruzha rwavo rwemhanzi kuburikidza nemabhuku.
"Miniti Rihanna akapinda mukamuri, yakaita sevamwe vasikana vaviri vakanga vasipo."
Akayeuka kuti Rogers weRihanna aifadza zvikuru kuti akambomubata mukurumbira wakanaka.
Vakuru vatatu vakaitirwa Rogers avo vainyanya kufadzwa nekuitwa kwaRihanna ndokumukoka kuNew York kuti anyore mamwe matepi ekudhiridzirwa angatumirwa mavara erekodhi.
Rihanna ane makore 16, akanga asingabvumiri mukana unotadza kupfurikidza neminwe yake sezvaaitarisira mugore raitevera, akaenda kumba kwaRogers kuConnecticut kuti aite basa rekudhiridza album yake.
"Pandakabva kuBarbados, handina kutarisa shure," akadaro. "Ndaida kuita zvandaifanira kuita, kunyange zvaireva kutamira kuAmerica."
Rihanna Childhood Story Plus Untold Biography Facts: Simuka Mukurumbira
Achiri kugara kuConnecticut, naEvans Rogers nemudzimai wake, Rihanna akashanda nomunyori wenziyo Carl Sturken kuti abudise rwiyo rwemimhanzi mana urwo rwakabatanidza "Pon de Replay" iro raizotanga kuva rayo rokutanga risina kuroorwa. Zvakanga zvisati nguva refu vasikana vake vakagamuchira kuongorora kwakanaka kubva pakambani ye Def Def kurekodha iyo inozivikanwa kuti yakasaina muimbi Kanye West.
Somugumisiro, akakumbirwa kunyoresa kwekambani iyo mutevedzeri wavo aiva ainzi Jay Z.
"Ndakanga ndichitinhira chaiyo, Kubva kubva kurarama muBarbados uye ndisingambofi ndakasangana nemukurumbira kuti ndinosangana uye kuongororwa kune mumwe munhu akaita saJai Z ... ah!"
Kunyange zvakadaro, akaisa basa rinoshamisa raakaona rakashamiswa neJay-Z rakamuinyorera pakarepo. Akabatwa nekutsigirwa kwekodha yakanaka Rihanna akanyora kubudirira kwekutanga nekubudiswa kwebumbiro rake rekutanga, "Music of the Sun" mu2005 iyo yakazoteverwa nekubudirira kwe "Musikana Anofarira" muna 2006. Kubudirira kwaRakhanna kwakauya mu2007 paakafamba nekushandurwa kwakakwana kubva mumusikana wechidiki wepamu kuimba kusvika pakupedzisira gurukota nechechitatu ye "Good Girl Gone Bad".
Album iyo yakarongerwa nhamba mbiri muAustralia, kuU.S. uye nyika dzakawanda, yakaratidza Rihanna akabatwa asina kuroorwa "Umbrella" iyo yakamupa Grammy Award. Vamwe vose, sezvavanotaura, inhoroondo.
Rihanna Childhood Story Plus Untold Biography Facts: Ukama Hupenyu
Rihanna haana huwandu hwehukama hwepamberi hwa19 asati amuka mukurumbira uye pashure. Tinokuunzirai mashomanana emhando yake yerudo rukuru.
Kutanga uhu hukama hwaRihanna nemukomana wake wekutanga, Negus Sally. Doo aiva neukama hwepedyo pakati pe2001-2003 nguva iyo yakabatana neRii's career kuvaka. Hazvishamisi kuti Neagus yaizoti makore anozoti:
'Hapana munhu anomira mukana naRihanna ... iye akanyanya kufunga nezvebasa rake kuti agare pasi,'
Zvechokwadi, mazwi eNeagus akaonekwa muhukama hwaRihanna husina kukanganiswa naRecake naLos Angeles Dodgers kunze, Matt Kemp.
Nguva dzaakanyora chimwe chinhu pedyo nekuzvipira kwaiva panguva yehukama hwake naChris Brown (2007-2013).
Uyewo nemabhiriyoni eArabia Hassan Jameel (2016-2018).
Chengetedza kutaura kuti mukomana waRohanna wokutanga anotaura zvakaramba achibvumirana kusvikira News breaks of her engagement.
Rihanna Childhood Story Plus Untold Biography Facts: Upenyu hweMhuri
Rihanna akaberekerwa mumhuri ye5. Tinokuudza mashoko echokwadi pamusoro pechipfuva chake uye mhuri.
Pamusoro pababa vake: Baba vaRihanna, Ronald Fenty vakazvarwa musi we 16th weAugust 1954. Kunyange zvazvo Ronald aive asina hanya nekushandisa zvinodhaka uye zvinodhakwa, akaronga pfungwa dzevabereki yekudzidzisa mwanasikana wake kuti ave webhizimisi sezvaaiwanzoenda naye kuti amubatsire kutengesa nguo.
"Aigara achitengesa zvinhu kune rumwe rutivi rwegwagwa sezvandaiita. Aiuya kunze kwechitoro ndokuisa rack uye akatengesa zvipfeko uye mabhanhire uye zvitsvuku. Aizotengawo masukisi, aiisa mumapakiti uye ovatora kuchikoro kuzotengesa shamwari dzake nokuda kwebatsiro ".
Ronald uyo akaparadzaniswa nemudzimai waRaihanna apo muimbi akanga akwegura 14 iye zvino haana kushandisa zvinodhaka uye anoenderera mberi neukama hwepedyo nemukurumbira wake mukunda.
Pamusoro paamai vake: Amai va Rihanna Monica Braithwaite vakazvarwa musi we 5th waApril 1969. Amai vaAfro - Guyanese avo vakashanda semabhadhari panguva yevaimbi vakaberekwa vave vachitsigira kurota kwemwana wavo uye vanozvikudza nezvezvaakabudirira.
Nezvehama dzake: Rihanna akakurira nehanzvadzi mbiri: Rorrey Fenty (akaberekwa 13th November 1989) uye Rajad Fenty (akaberekwa 15th April 1996).
Rorrey muchengeti webasa uyo anoenda nezita rematambo Gallest apo Rajad ari munhu anofara-go-lucky uyo ave shungu dzemashoko nekuda kwezvisungo zvaanosangana nehanzvadzi yake.
Nehanzvadzi dzake: Rihanna ane 3 hafu yehama dzake dzaive dzakaberekerwa nababa vake kubva kune hukama hwakapfuura uye hwakatevera. Chokutanga pakati pevatatu ndiye mukuru wehanzvadzi yake Kandy (akaberekerwa mu1971) anoshanda semubatsiri weParamist muBarbados.
Kandy ari panguva iyo iyi post amai vane vana vaviri, Brandy naCrystal. Anofarira kuti aifanira kuziva kuti baba vake vaivapi panguva yaAs 30.
Chimwezve imwe hanzvadzi-Samantha (akaberekerwa 1981) anoshanda semubatsiri wezvematongerwo enyika yehurumende dzeCaribbean.
Kusimuka kubva kune hafu-hanzvadzi, Rihanna chete mukoma-mukoma ndiJamie Black (akazvarwa 1981). Jamie anoshanda somunhu anofambisa mifananidzo uye muumbi
Rihanna Childhood Story Plus Untold Biography Facts: bata chibharo
Rihanna ane chikamu chake chechisimba mumhuri musi we 8th waFebruary 2009 paakarohwa naiye-boyfriend, Chris Brown. Kurwiswa kwakaitika musi waaifanira kuita paChmUMXst Annual Grammy Awards, zvakasikwa zvakaitika pashure pokunge Rihanna akatarisana naChris pamusoro pemashoko aakawana kubva kune mukadzi asingazivi pafoni yake.
Nguva pfupi gare gare, kurwiswa kwakasimbiswa nemufananidzo wakakanganiswa kubva kumatare emapurisa izvo zvakaratidza kuti Rihanna akachengetedza kukuvara kunooneka.
Kunyange zvazvo Brown aipomerwa mhosva yekurova uye nekuita zvingangoita zvekutya muna March 2009, Rihanna akawana zvikonzero zvekuita zvakare zvakare mu 2012 uye pamwe akabudisa rwiyo rwe "Birthday Cake" gore iroro.
Rihanna Childhood Story Plus Untold Biography Facts: Movies
Kunze kwekuzvipira kwemimhanzi, Rihanna akaita mune mamwe mafirimu anosanganisira Battleship (2012), Uyu Ndiyo Mugumo (2013), Ocean's Eight uye akabhadhara inzwi rake kune mumwe munhu wevanhu vakuru mumutambo wehupenyu, Home (2015) ).
Rihanna Childhood Story Plus Untold Biography Facts: Investments uye Zvibvumirano
Rihanna, kunze kwokugadzira mimhanzi uye kutarisa mumabhaisikopo, anoita mari yakawanda kuburikidza nemimwe nzira zhinji. Chokutanga kuvimbiswa kwake kunosangana nemitambo yakadai seBalmain, Armani, Mac, River Island uye Puma.
Iye anewo muchero wake wezvinonhuwira, zvinonhuwira uye chirairo asingatauri maitiro ake, Fenty Beauty.
Yakawedzerwa kuhuwandu huri kukura ndeyekutsvaga kwake muimba yekugara. Haasi iye benzi bhizimisi akachenjera ari kutonga chaizvo umambo ?.
Rihanna Childhood Story Plus Untold Biography Facts: Zvimwe Zvako
Rihanna ndomumwe wevashoma vanozivikanwa vanoedza kuve shanduro yakanaka ivo pachavo zuva risina kubatwa muwebhu kana kusachengetedzwa kwakavharwa mumakwikwi. Maererano naye:
"Handimbofungi kuti ndiani kana kuti chii chiri pamusoro, nokuti apo vanhu vanova nani pane zvavanoita mumwe nomumwe, zvinoonekwa. Uye ndizvo zvandinoda kuva: munyori aizivikanwa nekukura nguva dzose uye achikura uye ari nani. Hazvirevi kuti ndiani ari nani pakati pe Rihanna, Katy Perry uye Lady Gaga. Ini ndiri mukuru mukukwikwidzana neni. Ndinogara ndichizvipinganisa kuti ndiite zviri nani nguva inotevera. Hazvinei kuti ndiani ari kumusoro chero bedzi ndiri kuswedera pedyo nenguva iyo nguva dzose. Ndizvo zvose zvandinotarisira. "
Izvo zvakanaka mutambi muimbi anowananisa nevamwe vashomanana mukudzorera kumunharaunda sezviri pachena mukati maro 2012 musangano weClara Lionel Foundation, (akatumidzwa nembuya navanasekuru vake). Nheyo dzinoshanda kunatsiridza hutano hwehupenyu kune vagari venyika yose munzvimbo dzehutano, dzidzo, hutsika uye tsika.
Nezvezvinhu zvekutenda iye akambotaura tere "Mwari rudo" munaFebruary 2012 uyewo akakudza Mwari mu Twitter post achicherechedza makore makumi mapfumbamwe ekutanga kwebhuku rake, Music of The Sun.
Kuna Mwari ngaakudzwe #MusicOfTheSun
- Rihanna (@rihanna) August 30, 2014
Rihanna Childhood Story Plus Untold Biography Facts: Other Facts
Rihanna anonzi ari kubhadharwa $ 100,000 nevashandi vefashoni vanoda kuti agere mumutsara wepamberi wezviratidzo zvavo zvema catwalk uye kuisa makamera pamasvondo eMafashoni akasiyana-siyana.
Pamberi pekushanda, Rihanna anozvinyengedza seshamwari uye anoenda kuvateereri kuti vanzwe kunzwa simba ravo. Anopfeka hoodie kuti azvichengetedze kubva pakuzivikanwa.
Pane imwe nguva, Runyerekupe rwenhema rwakanga rwune ruzivo rwekuti Rihanna akanga ane hukama naJay-Z, uyo aive naBeyonce panguva iyoyo.
RiRi ndiye anonyanya kushamwaridzana nemuimbi anozivikanwa Katy Perry uye aifanira kuva musikana wekubwinya panguva yechato chake, asi haana kukwanisa kuenda kuIndia nokuda kwechiitiko chacho.
Bharabhasi akambosika holide yekurumbidza Rihanna mu2008. Kupindura, Rihanna akaisa hurukuro yekusununguka kune vatevedzeri vomunharaunda yake senzira yekureva kutenda.
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Rihanna Childhood Story pamwe chete biography nhoroondo. At ChildhoodBiography, isu tinoedza kururamisira uye kusaruramisira. Kana ukaona chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka munyaya ino, chinyorwa iwe taura nesu!
Childhood Biography Diary- ye AMERICAN ACTRESSES
Yakagadziridzwa zuva: Chivabvu 9, 2020